Wasiir katirsan Somaliland oo ku dhawaaqay in uu is casilay kana hadlay sababta is casilaadiisa – STAR FM SOMALIA
Wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Maamulka Somaliland, Cabdikariim Axmed Mooge ayaa galabta ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi, waxa uuna faah faahin ka bixiyay sababaha iscasilaadiisa ka dambeysay.
Qoraal kooban uu bogiisa soo dhigay Wasiirka ayuu kaga hadlay sababaha ku kalifay in uu is casilo, waxa uuna cadeeyay in is casilaadiisa uu u gudbiyay Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo.
”Waxa aan halkan ka cadaynayaa in aan iska casilay xilkii aan umada u hayay, is casilaadaydiina aan u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland. Waxa aan uga mahad naqayaa madaxweynaha xilalka kala duwan ee uu ii magacaabay si aan umada ugu shaqeeyo, Waxa aan mahad taas la mid ah u dirayaa qof kasta oo igu taageeray intii aan xilka umada u hayay, Waxa aan rabaa in aan u madax banaanaado hawlo ii gaar ah oo ay ugu weyn tahay ololihii la dagaalanka qabyaalada iyo sinaanta shacabka somaliland” Ayuu yiri Cabdikariim Axmed Mooge.
Wasiirkan galabta iscasilay ayaa ahaa aqoonyahan dhalinyaro ah, waxaana Wasiirkan dhalay Fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Mooge Liibaan, waxa uuna in mudo ah shaqooyin kala duwan ka qabtay Maamulka Somaliland.